अब सहकारीले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ लाखसम्म ऋण दिने !
मुख्य पृष्ठसमाचारअब सहकारीले पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ लाखसम्म ऋण दिने !
घोराही, असोज १६
सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने नीति ल्याएसँगै दाङको एउटा सहकारी संस्थाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने भएको छ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१५ स्थित सिसा सगुन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले शिक्षित बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन यस्तो खालको नीति ल्याएको हो ।
सहकारीका अध्यक्ष बालचन्द्र शर्माका अनुसार व्यवसाय गर्न चाहने शिक्षित युवालाई ऋण दिन सुरू गरिएको हो । उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने नीति संस्थाको साधारसभाले पारित गरेको बताए । सो निर्णय शहरी रोजगार तथा शहरी प्रर्वद्धन शाखाको अनुमोदन गराएर स्वीकृत लिएपछि कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ ।
सो सहकारीले एसइइ परीक्षा उत्तिर्ण गरेकालाई रु २५ हजार, प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तिर्णलाई रु ५० हजार, स्नातक तह उत्तिर्ण गरेकालाई रु तीन लाख तथा स्नातकोत्तर तह उत्तिर्ण गरेकालाई रु पाँच लाखसम्म कर्जा दिने भएको छ । सहकारीका अध्यक्ष शर्माका अनुसार कर्जा दिनका लागि सहकारीले रु ५० लाख बजेट छुट्याइसकेको छ ।